"Dowladda Federaalka Soomaaliya waan mamnuucnay ilaa inta ay doorashadu ka dhaceyso" - BBC News Somali
Image caption Doorashada Jubbaland ayaa la filayaa inay dhacdo bisha Agoosto gudaheeda
Maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay inaysan wax wadashaqeyn ah ah la yeelan doonin mas'uuliyiinta Federaalka Soomaalia, ilaa inta laga soo afjarayo howlaha doorashada maamulkaas ee foodda nagu soo heysa.
"Annaga ayaa mamnuucnay wadashaqeyntii nagala dhaxeysay dowadda Federaalka, aniga ayuu ahaa ninkii ku dhawaaqay go'aankaas markii uu kasoo baxay golaha wasiirrada, inta ay doorashadu ka dhaceyso waan joojinay wadashaqeyntooda, way isku dayeen in wasiirkooda arrimaha gudaha uu soo fara galiyo arrinta iyo howsha isimada, laakiin taasi dastuuri ma aha, waana ugu sheegnay cod dheer iyo cod gaabanba", ayuu yiri Wasiirka.
Wuxuu sheegay in ay labada dhinac isku mari la'yihiin raacista dastuur-ka, laakiin go'aankoodu uusan ka dhigneyn inay ka go'een Federaalka intiisa kale.
"Federaalka kama madax bannaanin, mana dooneyno inaan ka madax bannaanaanno, waxaana leenahay aqoonsada dastuurka dalka u yaalla, inta ay doorashadu socotana naga daaya carqaladda iyo faragalinta, markii ay dhammaatana diyaar baan u nahay wixii wadashaqeyn iyo dood ah".
"Maanta waxaa Kismaayo yimid janaraalladii howlgalka Amisom, ujeeddada socodkoodu waxay ahayd inay indha indheeyaan habsami u socodka diyaargarowga doorashada, waxay la kulmeen guddiga amniga iyo madaxweynaha, howlaha ammaanka ayaana laga wada hadlay. Sidoo kale Janaraalka ugu sarreeya Amisom wuxuu halkaas ka caddeeyay inaysan jirin faragalin ay ku hayaan arrimaha doorashada Jubbaland, wuxuuna yiri 'annagu siyaasad shaqo kuma lihin, doorkeennu waa difaaca', haddii ilaalada Amisom aan u baahannahayna wuxuu sheegay inay nagu taageeri doonaan booliska Amisom" ayuu yiri Injineer Cabdi.
Image caption Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa sidoo kale saxaafadda u faahfaahiyay kulanka
Image caption Saraakiisha ka socda IGAD ayaa kulan la yeeshay guddoonka doorashada
Qodobka uu muranka ugu weyn ka taagan yahay ayaa ah go'aankii odayaasha dhaqanka loogu amray inay soo gudbiyeen magacyada saddex qof oo loogu tala galay in midkood ay guddiga doorashadu xildhibaannimada u xushaan.